xalada taagan - Addis Maleda
6 hours ago-ከ250 በላይ የአገር ውስጥ እና የውጪ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት የንግድ ትርዒት እና ባዛር ሊከፈት ነው
6 hours ago-“የኢትዮጵያ መንግስት የታሰሩትን ጋዜጠኞች እና የሚዲያ ሰራተኞች በአስቸኳይ መልቀቅ አለበት”:-ሲፒጄ
6 hours ago-ማዕከላዊ ዕዝ አገርን ሊያሸብር የሚያስብ ማናቸውንም የጠላት ኃይል መደምሰስ የሚያስችል ወታደራዊ አቅም መገንባቱ ተገለፀ
7 hours ago-በኢትዮጵያ የፀጥታና ደህንነት ኦፕሬሽን አካሄድን በተመለከተ ግምገማ እየተካሄደ ነው
7 hours ago-በኦሮሚያ ክልል 'ቡሳ ጎኖፋ' የተሰኘ ንቅናቄ ተጀመረ
Category: xalada taagan
Waxaa la aaminsan yahay in saxaafaddu ay ka xorowdo dowladnimada iyo qeybaha kale, xoriyadda saxaafadduna ay tahay mid aan la qiyaasi karin. Itoobiya waxay ka mid tahay dalalka aan xoriyadda saxaafadda la dammaanad qaadin sannado badan. Itoobiya waxa ay ka…
Waqtiyo kala duwan ayaa dalka Itoobiya waxaa laga soo sheegayay hub sharci darro ah oo laga soo sheegayay labada gobol iyo caasimadda Addis Ababa. Qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn u hadal haya ka ganacsiga hubka ee sharci…
Taariikhdu waxay sheegaysaa in 86 sano ka hor oo ku beegnayd 1928-kii uu Talyaanigu soo galay Itoobiya, isla maalintaas oo ahayd April 27, Marshaal Badalio wuxuu tuuray calankii Itoobiya ee cagaarnaa, jaalaha iyo casaanka ahaa, wuxuuna suray calanka Talyaaniga. Talyaanigu…
Fursad wax ka bedelka dastuurka
Marka la sameeyo dastuurka dalka oo ah tiirka ugu weyn, waa in dhammaan muwaadiniinta laga qaybgaliyaa si heersare ah. Taas beddelkeeda, waa qolyaha sharciga ah oo ku dooda in haddii dastuur loo sameeyo koox yar oo dano iyo ujeedo laga…
Socdaalka Tayada waxbarashada kor ilaa hoos mise hoos ika kor?
Wasaaradda Waxbarashada ayaa 26/03/2014 ku dhawaaqday in ay isu diyaarinayso imtixaankii u horeeyay ee jaamacadeed tan iyo 2015. Isaga oo arrimahaas ka hadlayana madaxa xafiiska waxa uu yidhi. Waxay u sahlaysa in ay soo saaraan arday xirfad iyo karti leh,…
Markay maciishada kor u kacdo, waxa hadda laga maqlayaa afkii bulshada, “Alla hoogay!”. Xaga saliida, inkastoo qiimaha maciishada uu kor u kacay, kirada; Haddii ay dhibaato ka timaado dhanka gaadiidka iyo arrimo kale oo la xiriira, waxa ay u badan…
Abaaraha iyo quusta ka taagan gobolada ay abaaruhu ku dhufteen
Abaaraha iyo quusta ka taagan gobolada ay abaaruhu ku dhufteen Afartan sano ka dib, waxaa sii fidaya deegaanada Koonfur Bari ee Itoobiya oo ay ka mid yihiin Konfurta Bari ee Itoobiya oo ay ka mid yihiin Koonfurta, Oromiya, iyo Soomaalida…
Lacagaha dawladu aay qorsheysay imisa inla eg ayaa lagu fuliya hawlaha loogu tala galay
Masiibooyinka dabiiciga ah ee ku soo badanaya dalka Itoobiya, waxaa jira dad badan oo u baahan in la caawiyo. Deegaan kasta waxaa ku nool dad badan oo u baahan in la caawiyo, waxaana dadkaas ka mid ah dadkii ku waxyeelloobay…
Waxbarashada iyo dadka bahiyaha gaarka ah qaba (Naafada)
Waxbarashadu waa mid ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah ee ay tahay in muwaadiniintu helaan. Itoobiya hadii la rabo in ubadku ay noqdaan kuwo xoog leh oo ku guulaysta waxbarashadooda oo ay noqdaan jiil waxtar u leh qoyskooda, bulshadooda iyo…
Natiijadii ka dhalan karta dagaalkii Ruushka iyo Ukraine iyo sida aay u saameyn doonto Africa
Dad badan oo Ruush ah ayaan u aqbalin Ukraine sidii dal madax-bannaan. Waxay u arkaan in ay ka go’day Ruushka Weyn 1991 khalad weyn oo taariikhi ah. Sida laga soo xigtay The Guardian, sagaal ka mid ah 10kii qof ee…
Dadka sida aay u baxeen aan soo noqonin
Sicir bararka, shaqo la’aanta, iyo dhaca, ka sakow maciishadaha oo kor u kacday, dadka oo meesha ka baxayna waa arrin dad badan ka walaacsan. Daraasaduhu waxay muujinayaan in boqollaal kun oo qof ay sannad walba ku dhintaan adduunka. Caddaymaha ayaa…
Gobolada Tigreega, Canfarta iyo Axmaarada oo ah kuwa sida tooska ah dhibanayaasha ugu ah dagaalka Itoobiya ayaa waxaa soo gaadhay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh muddo sanad ka badan
Inkastoo dagaalka Tigray uu socday muddo sideed bilood ah, wuxuu u wareegay gobollada Canfarta iyo Amxaarada bishii juulyo 2013 wuxuuna socday in ka badan sanad Bilahan waxaa goboladii ay dagaaladu ka dhaceen ka soo gaadhay khasaare naf iyo maalba leh….
Waayo si arxan ah ayaa loo laayay Muwaadiniinta magalada walaga Waa maxay sababta ay dawladdu uga amustay?
Saciid Hussein (magaca loo badalay) oo keligiis ku socda wadada. Marka aad aragto way fiican tahay, laakiin markaad u soo dhawaato, waxay ku hadlaysaa hadal mug weyn. Wuxuu ku nool yahay Addis Ababa, wuxuuna ka shaqeeyaa xafiis weyn oo dowladeed….
Miisaaniyada dheeraadka ah ee dawladda iyo sicir-bararka
Golaha Wakiilada shacabka ayaa fadhi gaar ah oo ay yeesheen 30-kii January 2014 ku ansixiyay miisaaniyada dheeriga ah. Isla maalintaas, waxay dawladda federaalku dib u eegis ku samaysay oo ansixisay miisaaniyada dheeraadka ah ee sanadka 2014-ka ee Itoobiya, waxaanay ansixisay…
Itoobiya waxaa ka jira arrimo badan oo aan xal loo helin oo kharash badan ku bixi kara
Xataa haddii uu xalku daahay, waxaa jira arrimo badan oo muhiim ah oo aynaan weligeen fursad u heli doonin inaan wax ka beddelno, waa maahmaahdii. Waxaa tusaale inoogu filan in uu dagaal ka soo gaaray. Iyadoo dowladda, maal-gashadayaasha gaarka ah…
Waxaa lagu magacaabaa Araga Ayale. Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray Awjoamba, Wojo Kebele, degmada Fogera, ee Koonfurta Gonder ee Gobolka Axmaarada.
Araga ayaa nooga sheekeeyay qaab nololeedka bulshada Cawramamba, gaar ahaan marka la eego dagaalada ka socda dalkeena, xilliyada sanadka cusub. Waxyaalaha ay beesha Aragaw garwaaqsatay waxa ka mid ah in aanay keenin khilaaf iyo kala aragti duwanaansho. Aragaw waxa uu…
Sidee bay go’aanka xukuumaddu uga laabatay dacwadda u saameeyey Qurba-joogta?
Waxaa la sheegay in Itoobiya ay soo food saartay cadaadis badan oo gudaha iyo dibadda ah oo ay ugu wacan tahay dagaalkii dhacay dabayaaqadii October 2013 ilaa hadda socda. Cadaadiska dibadda ayaa isna keenay cadaadis gudaha ah, jabinta maleeshiyaadkii kala…
Christmas iyo Baabtiisku waa mid ka mid ah ciidaha ugu muhiimsan Itoobiya. Labada ciidood ayaa inta badan laga xusaa meelo kala duwan oo dalka Itoobiya kamid ah, iyadoo Christmas-ka la xuso 29-ka December sanad walba iyo baabtiiska 11-ka Janaayo. Munaasabada…
In kasta oo ay reer Yurub ka tageen Afrika sannado badan oo bililiqo iyo dhac ay ku hayeen qaarada Afrika, haddana shaqadoodu waxay ka dhigaysaa Afrika meel ay colaado sokeeye ka socdaan, dhibaato iyo saboolnimo qoto dheer. Ka dib raadadkii…
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Hailemariam Desalegn ayaa iscasilay kadib arrimo dhanka amaanka ah. Bishii Maarso 2010, Ra’iisul Wasaaraha hadda, Dr. Abiy Axmed, ayaa xukunka qabtay ka dib markii uu is casilay Ra’iisul Wasaaruhu iskiis. Ra’iisal wasaaraha cusub ee xilka…
Musuqmaasuqu maaha kaliya in lacag la qaato. Qof ay masuuliyadi saarantahay oo masuuliyadiisi ka soo bixi waayay oo hawlahiisana ku saleeya danihiisa gaar ahaaneed masuuliyadiisina waxa uu kaga soo baxa si aan haboonayn. Arnta sidaasi ahna waxa la rumaysanyahay in…
Habka lagu abuuri karo jiil akhlaaq leh
Caruurtu waa ubax loo diyaariyay in la beero oo kale. Qooysku, bulshadu, dalka iyo jiilkuna waa beero falato uu diyaar ah in ay ubaxaasi beraan. Jiilka dalka hananaya waxa asaasidooda la bilaaba xiliga ay yaryaryihiin sida beerta marka midhaha lagu…
Dinagdeen Itiyoophiyaa qon-naan kandurfamu ta’u isaatiin gufuun hojii qonnaa irra ga’u kamuu dinagdee irratti dhiib-baabulchuu isaa hin hafuu.Saba-biinrakkooleeuumamaafinamtol-cheekan akka rooba yaroo malee hongee Awwaaniisaabiyyattiin homisha amma barbaadamu yammuu homishittu hin mul’atu. Sababiin kanaasbakkawwanhed-duutubeelli yammu mudatu qa-madiingaragaarsaa biyya alaatti yammu galu…
Waxa ay hore uu sheegeen madax ka tirsan degaanka canfarta in bishii hamle ee 2013kii malmihii ugu danbeeyay deegaankaasi gobolka loogu yeedho 4 meesha uu dhaw ee miyiga gaalikooma goob cafimaad weraar loo gaystay oo hub culus loo adeegsada,y in…
Cilmi bare ku xeel dheer arimaha cilmi nafsiga bulshada oo lagu magacaabo kurt lewin ayaa sheegay cilmi nafsiga bulshada waa qayb ka mid ah cilmi nafsiga,waana qayb ka mid ah culuumta saayniska ee lagu barto shaqsiyaadka ama kooxaha qaabka ay…
Waxa la ogsoonyahay in kooxda tplf ee goolaha wakiildu ay ku magacawday atrgagaxisada in ay sanad ka hor dhabarka ka toogateen ciidanka qaranka ee wuqooyiga dalka ku sugnaa, dagaaladii ka danbeeyayna ay kooxdu meelo badan dhibaatooyin ay soo gaadhsiiyeen. Dhibaatooyinkaasi…
Xaladaha xiligan xaadirka ah dalka ka jira marka la barbar dhigo xaladihi hore ee dalka ka jiri jiray waxa la is odhan kara waxaan hore loo arag ayaa dalka ka dhaca ama xaalado cakiran ayaa dalka ka jira. Xiliyadi hore…
Magalo madaxda dalka dhibaatooyinka ka jira ee ay dadku la kulamaan dhinaca gaadiidka ah waxa ka mid ah yarida baabuurta, marka uu qofku gurigiisa ka baxo gadiidki uu rabay sidi uu ku heli lahaa way adegtahay. Waxyaabaha dadka lacagtooda iyo…
Nin magaciisa la yidhaahdo Seciid Aden ayaa waxa u ku dhashay kuna koray deegaanka oromiya wuqooyiga gobolka welega xaafeda anguur gutin qebelaha afraad. Siciid waa wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysta ganacsiga, waxa uu sheegay in uu ku dhashay deegaanka…
Total views : 8945820